China Digital Temperature fandrefesana tsy misy fifandraisana sensor infrared STP9CDITY-300 mpanamboatra sy mpamatsy | Masoandro
Famerenana ny mari-pana nomerika tsy misy fifandraisana Sensor infrared STP9CDITY-300
Ny STP9CDITY-300 dia fantsom-pahitalavitra iray infrared mari-pana thermopile mari-pana infrared izay manamora ny fanamorana mari-pana tsy mifandraika amin'ny fampiharana marobe. Ao anaty fonosana TO-5 kely, ny sensor dia mampiditra sensor thermopile, amplifier, A / D, DSP, MUX ary protokolon'ny serasera. Ny STP9CDITY-300 dia novolavolaina tamin'ny sehatry ny mari-pana marobe: -40 ~ 125 ° C ho an'ny mari-pana manodidina sy -20 ~ 300 ° C ho an'ny maripanan'ny zavatra. Ny sanda mari-pana refesina dia ny mari-pana salan'isa amin'ny zavatra rehetra ao amin'ny Field of View an'ny sensor. Ny STP9CDITY-300 dia manolotra mari-pahaizana mahazatra ± 2 ° C manodidina ny mari-pana amin'ny efitrano. Ny sehatra nomerika dia manohana fampidirana mora. Ny teti-bidiny ambany herinaratra dia mahatonga azy io ho an'ny fampiharana mandeha amin'ny bateria, ao anatin'izany ny kojakoja elektrika ao an-trano, ny fanaraha-maso ny tontolo iainana, ny HVAC, ny fifehezana ny trano / fananganana trano ary IOT.
Ny sensor nomerika Far Infrared Thermopile izay misy read-out IC izay mandrefy ny mari-pana amin'ny zavatra iray raha tsy mila mifandray. Mampiasa thermopile ity sensor ity mba handrefesana ny angovo Far-Infrared avoaka avy amin'ilay zavatra refesina ary mampiasa ny fiovana mifanaraka amin'ny herinaratra thermopile hamaritana ny hafanan'ny zavatra. Ity sensor ity dia mahatsikaritra ny mari-pana amin'ny -40 ℃ ka hatramin'ny 125 ℃ hahafahana mampiasa amin'ny fampiharana marobe. Ny interface I2C dia ampiasaina hifandraisana amin'ity fitaovana ity amin'ny fampiharana samihafa.
Ampiasaina be izy io amin'ny fahatsapana ny maripana tsy mifandray, toy ny fanaraha-maso ny mari-pana, ny refin'ny Index Index, ny rafitra fitantanana herinaratra, ny thermometre, ny fitsaboana ara-pahasalamana; ary ny fitiliana ny vatan'olombelona, ​​toy ny fanaraha-maso ny herin'ny fifandraisana, ny fanaraha-maso ny kahie, ny fanaraha-maso ny hazavana, ny fanaraha-maso ny tontonana.
Famokarana mari-pana niomerika
Namboarina tamin'ny alàlan'ny maripana marobe ny ozinina
Fifanarahana fifandraisana sy fampidirana mora ary
Manamora ny fanisana isa an'ny rafitra mihena
150 μA Hery ambany sy 2.5 V ka hatramin'ny 5.5 V Sakram-pitaterana an-tsokosoko
Fitaovana ao an-trano miaraka amin'ny fifehezana ny mari-pana tsy mifandray
Fatra fandrefesana mari-pana tsy mifampiraharaha avo lenta
Teo aloha: Surface Mounted non-contact Temperature Detection Temperature Infrared Sensor STPSMD38
Manaraka: Integrated ASIC AFE Thermopile IR Sensor Thermometer tsy misy fifandraisana amin'ny mari-pana STP10DF35G1